Zvikamu zvepurasitiki - Mestech Industrial Limited
Zvikamu zvepurasitikianoshandiswa zvakanyanya mumagetsi, zvigadzirwa zvemagetsi, kurapwa, imba yekuisa, mota, kubhururuka, indasitiri, chiridzwa uye mamwe maindasitiri. Plastic resin inogona kudziirwa muforoma mhango kuti uwane akasiyana maumbirwo uye hukuru hwepurasitiki zvikamu uye zvigadzirwa. Zvichienderana nekusimudzira kwazvino makemikari tekinoroji, akawanda uye akawanda marudzi epurasitiki anogadzirwa pamwero mukuru.
Mestech yave ichishanda mukugadzirwa kwezvikamu zvepurasitiki, kugadzirwa kwejekiseni uye jekiseni kuumbwa kwezvikamu uye zvigadzirwa, pamwe neyemashure-ekurapa maitiro senge kupenda kupenda, silika skrini yekudhinda uye electroplating. Zvigadzirwa zvedu zvepurasitiki zvevatengi zvinotevera:
Dzimba dzePurasitiki dzemagetsi
Double jekiseni Kuumbwa zvikamu
Transparent epurasitiki zvigadzirwa
Post kugadziriswa kwepurasitiki zvikamu
Plastiki pani ine 3D nano skrini yekudhinda
Hofisi zvigadzirwa zvemagetsi
Zvigadzirwa zvepurasitiki zveNylon
Metal muwedzero Kuumbwa
Dzimba dzisina mvura
Zvinoitwa epurasitiki zvigadzirwa:
1 kurema uremu Inogona kushandiswa kugadzira zvisingaremi zvikamu uye zvigadzirwa.
2 Yakanaka makemikari kugadzikana uye ngura kuramba Mapurasitiki mazhinji ane yakanaka ngura kuramba asidi, alkali uye mamwe makemikari
3 yakanakisa kuputira magetsi, Yakajairika mapurasitiki mapurusi asina kunaka emagetsi, uye kumeso kwavo pamusoro uye nemhando yevhoriyamu yakakura kwazvo. Naizvozvo, mapurasitiki anoshandiswa zvakanyanya mumagetsi nema mechanical maindasitiri. Zvakaita epurasitiki insulated kudzora waya.
4 Kupisa kwakanaka kwekupisa kwekupisa kwepurasitiki kwakaderera, zvakaenzana ne1 / 75-1 / 225 yesimbi,
5 hwakawanda hwesimba remagetsi. Iyo ine yakakwira yakatarwa simba Iyo michini zvimiro zvemapurasitiki, senge kuomarara, tensile simba, elongation uye kukanganisa simba, zvakaparadzirwa zvakanyanya. Nekuda kwesimba rayo rakadzika uye rakasimba simba, mapurasitiki ane akasimba akasimba simba.
6 Iyo ine yakanaka yekukanganisa kuramba, ruzha kubviswa uye kuvhunduka kutora.
7 Yakanaka kupfeka kuramba uye kujeka
8 Yakanaka mapurasitiki: zviri nyore kuumba akasiyana maumbirwo uye hukuru hwechigadzirwa zvikamu neforoma kudziyisa, kuti uone yakakura-isingaite uye inoshanda kugadzirwa.
Mestech inyanzvi inogadzira jekiseni muforoma uye zvikamu zvepurasitiki. Tinogona kupa vatengi akasiyana epurasitiki zvigadzirwa uye masevhisi, tinotarisira kushandira pamwe newe.Ndapota taura nesu kana zvichidiwa.